Article First - Shenzhen Anoshamisa Technology Co., Ltd
Tiri achinyatsoziva zvinorehwa nguva uye zvakarurama kwamuri, ndokusaka isu vakazvipira pachedu nekaviri achisimbisa wako wedunhu magadzirirwo faira pamberi pcb kugadzira uye nokukurumidza kukurukura nemi kana paine hanya kana mibvunzo yako yakadhindwa redunhu mapuranga panguva kugadzirwa.
Kunyange zvazvo Free DFM & DFA cheki richashandiswa pamberi redunhu mapuranga peungano, zvinobvira nyaya kuti munguva pcb gungano rikurumidze. Kuti aponese iwe nguva uye kuwedzera yakarurama rako vakawanda zvigadzirwa yakaderera cost, tinopa Nyaya yokutanga rokuongorora uye kufarirwa basa.
Article First Inspection (FAI)
FAI rinoitwa musi wokutanga mumwe maviri apedza mapuranga risati vhoriyamu kugadzirwa kuitira kuti zvikanganiso anogona kuwanikwa, dzakachinjwa uye akamira kubva mafashamo pakati vakawanda zvigadzirwa nenguva.
Nokuda rokuongorora nezvaanogona pamwe kushanda kubhururuka vachiongorora Chrono (zvoga Optical Inspection) uye AXI (zvoga X-ray Inspection), redu rokuongorora zvinhu siyana zvokuvakisa, ruzivo, kugadzira, unhu kuti midziyo. Detailed zvinhu dziri pasi apa:
1). SMT nzira
5). Solder majoini
3). Reflow pokunamatidza
1) .Printing uye hwakawanda chiteshi
Kamwe FAI yapera, tinenge kukupa runoenzanirana rokuongorora mushumo yokutanga nyaya redunhu bhodhi. Uyezve, mainjiniya yedu ichava kuwanikwa kuuya pamwe okukurira kubata zvikanganiso kuti nechokwadi kwako pcb magadzirirwo unhu vanogona kutevedzera zvachose pamwe chokupika zvinhu uye zvirongwa.
First Article Chokutenderwa
Mangoti Nyaya yokutanga wedunhu bhodhi anobuda, une mbiri kusarudza dzika kwavo yokutanga nyaya Mvumo:
Option 1: Nokuti chikuru cheki uye rokuongorora, tinogona paemail imi mifananidzo nyaya yokutanga purangazve.
Option 2: Kana iwe zvinoda rokuongorora neyakarurama, tinogona anotakura kutanga nyaya bhodhi kwamuri kuitira kuti iwe unogona kutakura kubuda rokuongorora yako pachako workshop.
Hazvinei iyo nzira tendero chinhu chakanaka pfungwa kuti kubuda yokutanga nyaya rokuongorora zvinodiwa mu nedanho zvakadzokororwa kuitira kuchengetedza nguva uye kuwedzera kunyatsoshanda. Uyezve, mainjiniya dzedu zvirokwazvo kuchinja nenguva kuitira kuti pave nechokwadi chokuti yakasarira tinova nguva uye risanyatsobuda.